Burma, inoshamisa nzvimbo yekuenda uye zvishoma zvinoshandiswa nekushanya | Absolut Kufamba
Burma iri mu Southeast Asia, kumiganhu, pakati pedzimwe nyika ne China e India, hofori mbiri dzenzvimbo iyi. Zvisinei, Myanmar, sezvazvinozivikanwawo, haisi diki, nekuti ine angangoita mazana manomwe emakiromita akaenzana.
Mundima yakakura kudaro, une zvinhu zvakawanda zvekuona. Kune maguta makuru seguta rako guru, Yangon, asiwo mataundi madiki anoita kunge akamira munguva. Saizvozvo, zvave zvakadaro hukuru tembere, asiwo ne inoshamisa nharaunda uye emakomo nzira. Uye zvakare, inyika yesimba rakasimba reBuddhist rakavhurwa kutashanyi kwete nguva yapfuura. Kana iwe uchida kuziva zvishoma nezve Burma, tinokukurudzira kuti urambe uchiverenga.
1 Chii chekuona muBurma
1.1 Rangoon, raimbova guta guru renyika
1.2 Naipyidó, iro ghost dhorobha
1.3 Bagan, iro guta rematemberi muBurma
1.4 Mandalay, chimwe chiitiko cheBurma
1.5 Hsipaw, imwe nzira yekushanya
1.6 Kakku Stupa Sango
1.7 Inle Lake, nzvimbo yemashiripiti muBurma
1.8 Gomo Popa uye monastery yaro
1.9 Mahombekombe eNgapali, iyo isinganyanyo kuzivikanwa Burma
2 Ndezvipi zviri nani kuenda kuAsia nyika
3 Chii chekudya muBurma
4 Ungasvika sei kuBurma
Chii chekuona muBurma
Kubva pane zvatichangobva kukuudza, Myanmar idhaimani mune yakashata kubva pakuona kwekushanya. Izvo zvave zvichangoitika munguva pfupi yapfuura kuti yabatana ne matunhu muSoutheast Asia uye zvishamiso zvaro zvakakura uye zvinoyevedza hazvisi kugamuchira mamirioni avanhu pagore. Chero zvazvingaitika, tiri kuzokuratidza zvimwe zveakanakisa.
Rangoon, raimbova guta guru renyika
Iri guta rine vanhu vanopfuura mamirioni mashanu vanhu raive guta guru reBurma kusvika 2005 uye inoramba iri nzvimbo huru yekupinda munyika. Nekudaro, harisi iro rakanyanya kunaka guta, zvirinani kana tikachienzanisa nevamwe.
Chero zvazvingaitika, ine zvinhu zvaunofanira kushanyira. Iyi ndiyo mamiriro eimba yezvinamato ye Shwedagon, mune iyo pagoda yezita rimwe chete inomira. Iyo inoshamisa stupa (muBurma ivo vanodanwa clowns) zana zana metres uye yakashambidzwa nendarama Kunyangwe ngano ichichipa makore zviuru mazana maviri nemazana mashanu, nyanzvi dzinozvitora pakati pezana ramakore rechitanhatu nerechigumi renguva yedu. Kubva pakuona kwechiBuddha, ndicho chakakosha kwazvo munyika, sezvo chiine zvisaririra zvayo Buddha.
Haisi iyo chete stupa iwe yaunogona kuona muRangoon. Isu tinokukurudzirawo kuti ushanyire iyo Sule pagoda, octagonal muchimiro uye zvakaenzana goridhe dhome, kana iyo Chaukhtatgyi pagoda, iyo inovaka chimiro chakakura cheBuddha, sezvazvinoitika mu paya Ngahtatgyi.
Naipyidó, iro ghost dhorobha
Kunyange iri iyo guta rekutonga kubva kuBurma kubvira 2005, hatizvipinze pano sekurudziro, asi nekuti irwo ruzivo. Yakagadzirwa zvine hunyanzvi mumaruwa uye inonzi inovhara nzvimbo yakapetwa katanhatu iya yeNew York. Zvisinei, zvave zvakadaro vanhu vashoma kwazvo. Muchokwadi, huwandu hwevagari haizivikanwe, kunyangwe ichifungidzirwa pamiriyoni imwe, inova isiri nzvimbo yenzvimbo hombe yakadai. Hatikurudzire kuti ushanyire, asi kana uchidaro, ita chokwadi chekuona iyo hombe Buddhist stupa ye Upatasanti.
Bagan, iro guta rematemberi muBurma
Inowanikwa pabani guru renyika, kumahombekombe e Irrawaddy Rwizi, yakaziviswa nguva pfupi yadarika Nhaka Yenyika nekuda kwetembere dzayo dzinoshamisa. Izvo zvinonzi kune zviuru zvina, asi iwo aunofanirwa kushanyira nenzira yakakosha ndeayo Ananda, kubva muzana ramakore regumi nerimwe uye akadana "Burmese Westminster Abbey" nehukuru hwayo; sulamani, kubva kuXII uye ine dudziro inoreva "Jewel mukorona"; Dhammayangyi, isingakanganisike neruvara rwayo rwebrown munzvimbo yavanenge vangangoita ese egoridhe, uye Shwezigon, yakakomberedzwa nemakona mana rimwe nerimwe rine mufananidzo weBuddha.
Mandalay, chimwe chiitiko cheBurma
Kumwe kushanya kwakakosha parwendo rwako rweBurma iguta reMandalay, rine zita rinomiririra chiratidzo chezvaunogona kuona mariri. Kutanga, kurasika mumigwagwa yakatetepa yeguta rayo rekare, rizere nekubatikana nemabhawa.
Asi pamusoro pezvose, shanyira zvakakosha Mandalay Palace, kwaigara mambo wekupedzisira wenyika. Inowanikwa mukati memuzinda uye yakavakwa muzana ramakore rechiXNUMX. Inosanganisira zvivakwa zvinoverengeka zvine matenga akapindirana uye, nenzira yeanecdote, isu tinokuudza kuti huwandu hwadzo uhwo kuvakwa kwega kwega kunoratidza kukosha kwazvo.
Iwe unofanirwa zvakare kuona muMandalay inoshamisa Mahamuni tembere, iyo inogara imwe isingadarike mufananidzo weBuddha. Kuenderera mberi nengano uye anecdotes, isu tinokuudza iwe kuti inoonekwa seye kopi yechokwadi chete zviripo kwaari munyika.
Chekupedzisira, kana iwe ukazviwana iwe uchikwanisa kukwira nhanho dzayo 1700, huya ku Mandalay Chikomo, iyo yaunowana inoshamisa maonero eguta.
Hsipaw, imwe nzira yekushanya
Izvo chaizvo kubva kuMandalay kuti iyo Myanmar inoshamisa kwazvo njanji yekushanya, chete inokodzera vafambi. Inosvika kuguta re Lashio, asi inomiririra nzvimbo dzayo dzinoyevedza uye, pamusoro pezvose, yeiyo Gokteik viaduct, chivakwa chesimbi chisina kusimba chinoda kusvika mazana manomwe emamita kubva pamusoro.
Chitima chinomirawo mutaundi re Hsipaw, iyo inokupa imwe yekushanya muBurma kunze kwemaseketi evashanyi. Muguta rino uchaona kuti hupenyu hwezuva nezuva hwevagari venyika yeAsia hwakaita sei uye unogona zvakare kushanyira Little Bagan, iyo Shan muzinda and the muslim musikiti. Asi pamusoro pezvose, enda kune iyo Chikomo cheVashanu Buddha, kubva pauri uchanzwisisa kushamisa kwezuva.
Kakku Stupa Sango
Sezvauri kuona, yese Burma izere netembere uye hupfu. Asi kana iwe uchida kuona yakasarudzika nyika yakasarudzika munyika yeAsia, shanyira iyo stupa sango re Kaku. Iko kufamba kukuru kwakarongedzwa nemazana madiki mazana maviri nemazana mashanu, imwe neimwe ine chimiro chayo cheBuddha, icho chinokusiya wakanyatso kufadzwa.
Inle Lake, nzvimbo yemashiripiti muBurma
Inowanikwa mu shan makomo Anosvika mazana mapfumbamwe emamita ekukwira kumusoro, kufamba mugungwa iri mashiripiti. Kutanga, inotaridzika kunge rwizi, iri zana makiromita pakureba uye mashanu chete paupamhi. Asi, pamusoro pezvo, kumahombekombe ayo kune misha mazana maviri vagari varo, Inta (o "Vanakomana vegungwa"), chengetedza zvese zvetsika zveBurma.
Gomo Popa uye monastery yaro
Imwe nzvimbo yakaputirwa mukati kusaziva NdiGomo Popa. Zvakaringana kuti iwe unomuona, akasurukirwa pabani, kuti iwe unzwisise zvatinoreva. Uye zvakare, kumusoro kwayo ndiko kwakanaka taung kalat monastery, iyo inoita kunge yakaiswa mashiripiti ipapo.
Kukwira kumusoro unofanirwa kukwira nhanho mazana manomwe nenomwe. Asi chenjera nezvinhu zvaunotakura nekuti hazvipere tsoko ivo vanochengetedza imba yemamongi uye vanozovabata nekushoma kushoma kwauinako.
Mahombekombe eNgapali, iyo isinganyanyo kuzivikanwa Burma
Zvine musoro, munyika kukura kweBurma kwaifanira kuve nemabhichi akaenzana zvakaenzana. Mune yako kesi, ivo vari munzvimbo ye Ngapali. Ivo vari kutanga kushandiswa nekushanya, asi ivo vachiri chengetedza imwe mhandara mweya. Kunakidzwa navo kunokutendera kuti uzorore mushure mekushanya kwakanyanya.
Ndezvipi zviri nani kuenda kuAsia nyika
Burma ine mhando dzakasiyana dzemamiriro ekunze. Asi, kazhinji, inotonga iyo Southeast Asia. Ndokunge, iwe unogona kuzviwana iwe mwaka miviri: iyo nyoro uye yakaoma. Yekutanga, pamusoro pekungonaya chete, inguva yemononesi uye inopisa zvisingaite saka hatikurudzire.
Zvirinani kuti iwe unoshanyira nyika munguva yakaoma, kunyanya pakati paZvita naMarch. Nekudaro, yekutanga yemwedzi iyi inoenderana nemwaka wakakwira, iwo mitengo yacho inodhura. Nezvikonzero izvi zvese, tinokukurudzira kuti uende kuBurma pakati paNdira naKurume.
Chii chekudya muBurma
Imwe yedzakanakisa nzira dzekuziva nyika ndeye kuravira kwayo gastronomy. Kashoma kushanya hakuna kukwana kana ukasazviedza. Chikafu cheBurma chakakanganiswa zvakanyanya neicho chevavakidzani vayo China, India y Tailandia. Nekudaro, iyo rice Icho chinhu chakakosha mumidziyo yavo uye mbishi zvinhu zvakare zvinomira se Andaman Gungwa Hove.
Kana zviri zvekutanga, vanogadzirira a mupunga unodya kana kuunzwa seyakaunganidzwa masisitimu ayo mune ayo akasiyana nga shaykh inotorwa pakudya kwemangwanani. Saizvozvo, manoodles o noodles izvo chinhu chakakosha.
Nezve izvo zvakajairwa ndiro, iyo masobho, inonzi hingyo, kunyangwe idzo acidic dzakadaidzwa chiyei. Kune chikamu chayo, ngapi Idzo imbanje dzinodyiswa nemiriwo uye mupunga; iyo lephet thoke saradhi yetii shizha, iyo zvakare ine kabichi nenzungu, uye iyo hto-hpu nwe Inosanganisira chickpea furawa unonamira nenguruve kana huku uye yakarungwa nepaprika nemiti inonhuhwirira.
Asi iyo yenyika dhishi yeBurma iri mohinga, mamwe mapunga emupunga achiperekedzwa nehove uye muto weonion. Iwe unogona zvakare kutakura zvimwe zvinoshandiswa senge miriwo, mazai akabikwa, nyemba dzakakangwa uye kunyange crispy bhanana tripe.
Asi iwe unogona zvakare kuedza iyo burmese curry, iyo inofambidzana neinenge zvese, kunyangwe ichigara iine mupunga, miriwo, miriwo, tofu nemuto ngapi ye. Pakupedzisira, iyo nan gyi thoke Inoratidzira maoodles makuru akakangwa nehuku, hove dzakachekwa, zai rakabikwa, uye zvinomera zvebhinzi.
Kuti upedze chikafu chako chaicho, une zvakare zviwitsi muBurma. Muchokwadi, tora a tii nemakeke Iyi itsika yakazara pakati pevagari vemunyika. Inonyanya kufarirwa ndeye mount, rudzi rwebundu rinotapira nemazambiringa akaomeswa uye coconut, uye iyo bein moun (isu tinofungidzira izvozvo mount zvinoreva chimwe chinhu senge keke), ari makeke anotapira uye anotapira.
Nekudaro, kana iwe uchida muchero, une zvimwe zvausingazoone kuSpain. Semuenzaniso, iye durian. Asi isu tinofanirwa kukunyevera kuti kunhuwirira kwayo hakunakidze. Muchokwadi, kune avo vakamushevedza "Chibereko chinonhuwa kwazvo pasi". Nekudaro, kana iwe uchinge wakunda izvo zvinokanganisa, nyama yavo ine hunhu hunoshamisa.
Kana zvasvika pazvinwiwa, iyo té mukusiyana kwayo kwakasiyana ndere nyika. Asi Burmese zvakare inodya yakawanda doro uye kunyange nekuda. Vazhinji vemuno munzvimbo iyi ndiyo tuuba, chinwiwa chinodhakwa chakawanikwa kubva kumuchindwe wekokonati.
Ungasvika sei kuBurma
Nzira yakanakisa yekupinda munyika yeAsia iri kuburikidza ne Yangon International Airport. Ivo zvakare vanayo Mandalay y Naypyidaw, asi ndege kubva kunze kwenyika hadziwanzo.
Kamwe muBurma, kufamba pakati pemaguta, akanakisa ndiyo mitsara ye bhazi. Unogona kuzviwana zvemarudzi ese, kubva kumotokari dzazvino nemhepo inodzikamisa kusvika kumavheni madiki evanenge makumi matatu vafambi. Iwe zvakare une mukana weku kurenda mota ine mutyairiasi haina kudhura. Zvakare, imwe nzira yekufamba ndeye kushandisa iyo mabhoti inoyerera nemunzizi dzenyika.
Pakupedzisira, kutenderera maguta makuru, newewo unayo mabhazi eguta. Asi zvimwe zvakajairika ndizvo Rickshaws, yakakurumbira munzvimbo ino yeAsia. Zvimwe zvepakutanga ndizvo mativi emotokari and the iwe Bein, ine mavhiri matatu uye yakafanana ne tuk-tuk de Tailandia. Nekudaro, iyo nzira inosarudzika yekutakura kwemaguta kune veko bhasikoro. Mumaguta ese makuru uchawana nzvimbo dzekurendesa.
Mukupedzisa, Burma inyika yakanaka isati yashandiswa zvakanyanya nevashanyi vakuru. Nekudaro, izvi zviri kutochinja nekuti zvinokupa iwe matemberi anoshamisa y hunhu uye hunoshamisa hunhu. Iwe unotsunga kuziva nyika yeAsia?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Burma
Chii chaungaona muCanary Islands